Insights - The unCommission
Zvinhu zvitatu zvakabuda zvine ruzha uye zvakajeka kubva kuunCommission nyaya. Mafungiro aya, achitungamirwa nemanzwi evatauri vedu vengano, ari kubatsira kuronga ramangwana rekudzidza kweSTEM.
Vechiduku havana kukanda mapfumo pasi; vakadzingwa, uye vanoda kuita mutsauko neSTEM
Mukati memwedzi mitatu chete, vechidiki vangangosvika mazana matanhatu munyika yese vakagovana nyaya dzavo neUnCommission. Nguva nenguva, vanyori vengano vakagovana chishuwo chavo chekushandisa STEM kugadzirisa matambudziko chaiwo epasirese munharaunda dzavanogara uye pasirese.
Isu sevechidiki tinoda zvechokwadi chimwe chinhu chatinogona kushandisa munyika chaiyo… semuenzaniso muchemistry, tinodzidza zvese nezve mamiriro enyaya kuti anoshanduka sei uye mafomula uye mutengo unobatanidzwa nazvo, izvo zvinogona kushamisa pfungwa uye kushungurudza nzwisisa, hatimboziva kuti nei zvichinyanya kukosha…Uye uku ndiko kudzima ipapo kwevadzidzi vakawanda mumakirasi eSTEM. Saka, zvino zvinomutsa mubvunzo unonakidza: ko kana? ko kana tikaita kuti dzidzo ishande? tinoratidza vadzidzi kuti kudzidza kuchikoro kunoenderana sei nehupenyu hwavo hwezuva nezuva? Ndinogona kungofungidzira kuti imhanho ine simba sei inogona kugadzira. "
- Rhea, ane makore gumi nemasere, Virginia
Kuti vabudirire muSTEM, vechidiki vanofanirwa kunzwa kuti ndeve STEM
94% yevatauri vengano vakakurukura nezvevanhu kana kuti vasiri vezvavo muzviitiko zvavakagovana neUnCommission. Kazhinji chiitiko chimwe chete chakaunza manzwiro ekuve munhu akakunda zviitiko zvekusave wake. Saizvozvo, 40% yevatauri vengano avo vaive nemafungiro ega ega kuti vaisava veSTEM vakatiudza nezve chiitiko chakavashandura kuti vanzwe kunge ndevavo, zvichiratidza kuti kuzvionera pachezvavo STEM hakuna kunyatsogadziriswa! Nhau dzakaratidzawo hukama hwakanaka pakati pekunzwa pfungwa yekuve munhu uye kutsvaga STEM kosi yechikoro chesekondari uye koreji uye, pakupedzisira, se STEM basa.
"Mugore rangu rejuniya, vakauya nekirasi itsva pachikoro changu, yaive sumo yesainzi yedata…[mudzidzisi] akataura neni, uye anoita sekuti, pane kirasi nyowani yandichadzidzisa. Uye ini ndinofunga unoifarira chaizvo, sekunge iri kumusoro kwemukoto wako uye zvauri kufarira, uye ndaingoita senge, kutya uye kutya, ndakaita senge, ndichatora iyi kirasi nyowani yemasvomhu iyo. hapana akambotora….Uye pandakangotanga kutora kirasi, uye sekudzidza zvese, ndaichida….kirasi iyi ndiyo yaive yakakosha padzidzo yangu kubva ipapo."
- Emilio, ane makore makumi maviri nemaviri, California
Vadzidzisi ndivo simba rakasimba kwazvo rekukurudzira kuve muSTEM
68% yenguva apo vatauri vengano vakashuma kuchinja kuenda kune yavo, mudzidzisi akafambisa kuti zviitike. Vatauri venyaya vakati vadzidzisi vavo vakarera 25 mapoinzi akawanda kupfuura chero mumwe munhu kana ruzivo muhupenyu hwavo. Muchokwadi, vanyori vengano vazhinji vakafurirwa nevadzidzisi vavo veSTEM zvekuti vakave vadzidzisi veSTEM ivo pachavo! Vatema, Native American, uye LGBTQ vatori venhau vaive 2x sezvingangoita kutaura nezvekunzwa kudiwa kuburikidza nekuzvibatanidza nerudzi rwevadzidzisi vavo kana murume kana mukadzi kupfuura vamwe. Nehurombo, Vatema, Native American, & LGBTQ vatauri venyaya vakakurukurawo nezvekusarurana kwevadzidzisi kana kuita zvepabonde. 2x kazhinji sevamwe vanyori vengano.
"Dr. N, handifi ndakavakanganwa. Vakaenderera mberi nenhaka yavo kwandiri, mukuva nevadzidzisi veVatema, vadzidzisi vechirume Vatema, vanokwanisa kundidzidzisa masvomhu uye kuisa rudzi rumwe cheterwo rwechivimbo nokuzviremekedza kwandaigona kuona. Ini ndoti, 'Oo, unogona kuzviita,' kana, 'edza nenzira iyi,' kana kungobata ruoko rwangu zvishoma, izvo zvandinofunga kuti vazhinji veVatema vangangotadza kuwana ... "
- Anonymous, ane makore makumi maviri nemaviri, Oklahoma